Imikhiqizo engu-8 esuka ku-Ulta Beauty iya Esitolo Njengamanje - Ubuhle
Imikhiqizo yethu ephezulu engu-8 kusuka e-Ulta Beauty ukuyothenga khona manje
Our Top 8 Products From Ulta Beauty Shop Right Now
USofia Kraushaar wePureWow
Uhlobo lwethu lwemithi yokunakekelwa kwesikhumba phakathi nobhadane? Ukuvuka, ukuphuma embhedeni, sithela amanzi ebusweni bethu futhi sizame ukungakhethi lutho kuze kube seqophelweni lokushiya isibazi (hheyi, kunzima kunendlela okubukeka ngayo). Kepha manje njengoba ihlobo selifikile, amaholide ayabhuka futhi nekhalenda lethu lezenhlalo selibuyile, okusho ukuthi mhlawumbe kufanele sinikeze ukunakekela isikhumba esinye isithombe. Nayi imikhiqizo eyisishiyagalombili esiyigcinayo kule sizini, kusuka esikrinini selanga kuya kuserum, konke Ubuhle be-Ulta .
1. Amakhiye we-Soulcare Golden Cleanser
Lokhu kuhlanza okunemfashini nokufanelekile kwethebulethi kuvela ku-Alicia Keys nodokotela wesikhumba uDkt Renée Snyder, futhi kusanda kufika nje ukuzokhipha ngobumnene ukungcola, izimonyo nokungcola ngoju lukaManuka olunothe ngama-antioxidant. Kumahhala ezakhiweni eziyingozi ezingaphezu kuka-1,600 (kulandela imithetho eqinile kakhulu yezimonyo ze-EU) futhi inephunga elibucayi, elihehayo lobisi lwe-oat nesage.
Ithenge ($ 20)
2. I-Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution
Uma utshala imali kumkhiqizo owodwa wokunakekelwa kwesikhumba kuleli hlobo-futhi ngokutshala imali, sisho ukuthi chitha i okuncane ngaphezu kwezindleko zelati yobisi lwe-oat-makube le seramu yemizuzu eyi-10. Inika isikhumba isiqalo esisha ngokususa amangqamuzana esikhumba afile, ithoni yakusihlwa kanye nama-pores angavaleki ngenkathi futhi kunciphisa nezimpawu zokuguga. Kepha, qaphela, ama-exfoliants can ube yinto enhle kakhulu: Yenza isivivinyo se-patch bese uqala kanye kanye ngesonto (ukushiya esikhunjeni imizuzu eyisikhombisa kuya kweyisishiyagalombili esikhundleni se-10 ephelele kungumqondo omuhle, futhi).
3. UMaui Babe After-Browning Lotion Tan Enhancer noMelaphi
Umzala ku-virus self-tanner sensation kuTiktok, le lotion yangemva kokushiswa asisizi kuphela ukuvuselela isikhumba sikasawoti-, somoya nesanga elangeni, futhi sinamafutha we-macadamia nut ne-aloe ukuthola ukuthambisa okwengeziwe ukuyeka ukuqhuma nokuxebuka ngaphambi kwalo kuqala. O, futhi sishilo ukuthi kunuka ushukela ofudumele onsundu nolwandle?
4. I-Tula Protect and Glow Sunscreen SPF 30
Awukafiki elangeni nsuku zonke okwamanje? (Ntombazane, woza.) Lesi sivikelo selanga esihlanzekile, esiphephile emifuleni sinezela ukukhanya okungokwemvelo ngaphansi noma kokugcotshwa okungaphezulu ngaphandle kokushiya amhlophe. Iyathambisa futhi iqukethe ukukhishwa kwama-probiotic, uphayinaphu kanye ne-papaya ukwenza ithoni yesikhumba bushelelezi ngasikhathi sinye.
Ithenge ($ 36)
5. Isikhumba Esimnyama Sentombazane Esimnyama SPF 30
Lesi sivikeli selanga sobuso nomzimba siqhubeka ngokuphelele nefomula yaso yobunikazi engasindi eyenzelwe isikhumba esincibilikile. Ungavumeli umbala ophuma ebhodleleni ukukhohlise: Unokuphela okuguqukayo futhi empeleni uyathambisa ngenkathi uvikela emisebeni ye-UVA ne-UVB eyingozi. Futhi, iyamelana namanzi kuze kube yimizuzu engama-80.
6. I-First Aid Beauty Ukulungisa i-Ultra Cream
Le ngqamuzana engasindi efakwe emakethe engcono kakhulu emakethe ngumhleli wethu wezenhlalo, ilungisa umgoqo wesikhumba ngenkathi ifaka i-hydration ngokushesha esikhunjeni esomile noma esonakaliswe yilanga. Ilungele ihlobo, ingena ngokushesha, ngakho-ke ayikaze izwe sengathi udinga ukusebenzisa isomisi sezinwele esibandayo ebusweni bakho ngemuva kokufaka isicelo.
7. UFlorence nguMills Uthole Lokho Okushuba Ebusweni
UMillie Bobby Brown unokukhanya okuthandekayo, futhi manje siyazi ukuthi kungani (kahle, ngaphandle kokuba, njengentsha). Ukuwashwa kobuso bakhe okunephunga elimnandi kususa ukungcola nokwakheka, kushiya isikhumba sithambile futhi sihlanzekile, kepha sisamnene ngokwanele ukuthi ungashiyi ubuso bakho buzwa sengathi bukhululiwe futhi bufakwe isihlabathi.
8. NgeSonto Riley Good Genes All-In-One Lactic Acid Treatment
Ukwelashwa kwe-lactic acid eyenza umsebenzi ophindwe kabili ngokuhambisa amanzi nangokhipha amafutha ku ngasikhathi sinye ngomunye wemikhiqizo ekhulunywa kakhulu ehhovisi lethu (cha, ngokungathi sína, uhhafu wethimba lethu ukhathazekile kanti enye ingxenye isivele iyingezile ohlwini lwezifiso zabo). Iphinde ngokushesha ifiphaze ukubukeka kwemigqa emihle nemibimbi ngemizuzu emithathu nje kuphela, futhi ingasetshenziswa ekuseni noma ebusuku.
Ithenge ($ 48)
Isixazululo sokuwa kwezinwele kanye ne-dandruff
izinwele zigundwe ebusweni obude
izingcaphuno ezinhle kakhulu zomngane wami omkhulu
ama-bra nama-panties brand
ama-movie wemfihlakalo alinganiswe phezulu
ikhambi lasekhaya lokulawulwa kwezinwele